LAURA, MPILATSAKA ANTSITRA-PO 2.0 | Grandir à Antsirabe
Tonga teto ny volana febroary 2018 i Laura, nanapa-kevitra ny hampiasa ny traikefa azony momba ny serasera izy mba entiny hanampiany ny fikambanana Grandir à Antsirabe mandritra ny taona iray.
I Laura dia anisan’ny mpanoratra ireo lahatsoratra izay ankafizintsika ao amin’ny tranonkalan’ny Grandir à Ailleurs…
ie, izaho no mpiandraikitra ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny mpanao gazety. Miasa miaraka amin’i Franco aho, izay mitovy amiko ny anjara asany ho an’ny tranonkalan’ny Grandir à Antsirabe izay mpiandraikitra ny serasera sy ny fiaraha-miasa.
Tsy manoratra lahatsoratra ihany no ataonao fa misy tadin-dokanga hafa amin’ny traikefanao ihany koa.
Ny andraikitro voalohany dia mametraka hetsika mikasika ny serasera mandritry ny taona. Raha halalinina kokoa dia miandraikitra ny fampiroboroboana sy ny fanentanana ireo tambazotran-tserasera aho toy ny facebook sy instagram, ny fanentanana ny tranon-kala amin’ny alalan’ny fanoratana sy fanaparitahana ireo lahatsoratra sy ireo vaovao. Ankilan’izay ihany koa dia mandrindra ny fitaovana aho rehefa misy hetsika karakarain’ny fikambanana toy ny fivoriana sy famelabelarana, ny lanonam-panokafana ho an’ny trano fandraisana vonjimaika sy ireo hetsika eo anivon’ny tambazotra OSCAPE. Miara-miasa amin’I Faranah ihany koa aho izay mpiandraikitra ny serasera an-tsary sy feo.
Inona no nahatonga anao hilatsaka an-tsitra-po ho an’ny fikambanana?
Nitady traik’efa arak’asa atao any ivelan’ny fireneko aho, eo amin’ny sehatry ny fikambanana. Nisafidy ny “service civique” aho satria io fifanarahana io dia mifameno tanteraka amin’ny zavatra efa nataoko sy ny asa tiako hatao ao aoriana. Nandritry ny fikarohana nataoko dia babon’ny bika aman’endriky ny tranon-kalan’ny Grandir Ailleurs aho. Ny pejy voalohany no nanosika ahy ho liana te hamantatra ity vondrona ity, ny mombamomba ny atrik’asany sy ny fototra hijoroany.
Ary ny amin’ny tohiny?
Angamba mpiandraikitra momban’ny atrik’asa koltoraly any Italia na Gresy ao anatina fikambanana mamonjy ireo mpitsoa-ponenana, antony iray mahakasika ahy manokana.
Ahoana no haminavinanao ny ho avin’ny fikambanana?
Manantena zavatra maro aho. Voalohany indrindra dia ny hitohizan’ny atrik’asa arakaraky ny filàna sy ny zavatra andrasana. Faharoa dia ny hanohizan’ireo mpisehatra eto an-toerana ny hetsika ohatra hoe ny firaisana. Ary farany dia ny hivelaran’ny fiaraha-miasa mankany amin’ireo fikambanana any amin’ny firenena hafa izay mitovy sehatra.
Ampahafantaro anay hoe iza ianao amin’ny alalan’ireto fanontaniana ireto.
Raha sakafo ianao?
Tsy ampihambahambana, ravitoto sy tsaramaso. Sakafo tena Malagasy izay tena ankafiziko tokoa, izay mampitony ahy ary mora hita any amin’ireo mpivarotra hani-masaka.
Raha toetra tsara na ratsy?
Manapa-kevitra amin’izay ataoko aho, fa indraindray anefa raha tafahoatra loatra izany dia lasa tsy miheno ny hafa.
Ary raha biby ianao?
Ny havaliko azy dia hoe : “écureuil” satria izy tsy tia sehoseho sady mavitrika. Haingam-pandeha!
Teny farany ho an’ny mpamaky?
Tena voninahitra ho ahy ny mandray anjara amin’ity traik’efa mahafinaritra ity mandritra ny iray taona. Nanaitra ahy manokana ny fandraisana, ny tsikitsiky sy ny hafanana zarain’ireo mponina. Mety ho sarotra ny fiverenana fa na izany aza aloha tsy eritreretina izany.